Nosakanan'ireto andiana mpianatra ireto tamin'ny kodiarana mirehitra ny lalam-pirenena faha efatra manandrify an'Antanimalandy. Tapaka nandritra ny minitra maro ny fifamoivoizana ka voatery nidina teny an-toerana ny mpitandro ny filaminana.
Tsy nanaiky hiala anefa ireo mpianatra fa vao maika nitora-bato ka naparitaka tamin'ny baomba mandatsa-dranomaso.
Mbola nitohy hatrany anaty ala-manga ny fifanenjehana teo amin'ny roa tonta izay nampihorohoro ny mponina teny an-toerana.
Mpianatra roa lahy no voasambotra, dia ny filohan'ny fikambanan'ny mpianatra avy any Antsiranana sy avy amin'ny faritra Sofia. Efa navotsotry ny Zandary kosa ireo mpianatra telolahy izay voasambotra omaly.
Mitsingerina androany ny 10 janoary izay nahafaty ilay mpianatra iray mpanao fitokonana voatifitra nandritra ny grevy nataon'ny mpianatra tamin'ny taona 2014 ary mbola ato anatin'ny grevy hatrany no hahatsiarovan'izy ireo izany. Io no antony nahamafy ny hetsika androany raha ny fanazavan'ny filohan'ny fikambanana BDEUM Ravelondrazana Hitilère.